र,क्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाली से,ना आ,बस्यक परे युद्ध गर्न तयारी अबस्थामा भनेपछि . (पूर हेर्नुहोस) – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/र,क्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाली से,ना आ,बस्यक परे युद्ध गर्न तयारी अबस्थामा भनेपछि . (पूर हेर्नुहोस)
काठमाडौं, २० जेठ । नेपाल र भारतबीच सिमा विवादले दुई देशको सम्बन्धमै समस्या आइरहेको छ । वार्ताको वातावरण बन्न सकेको छैन । कोभिड १९ का कारण तत्काल वार्ताको सम्भावना न्युन देखिएको छ ।